विमानस्थलभित्रै भवन बनाउँदै सुन तस्करीका अभियुक्त
'सुन तस्करीमा संलग्नले विमानस्थलभित्रै व्यवसाय गरेपछि यहाँको अवस्था के होला?’
असार २६, २०७५| प्रकाशित १५:५३
काठमाडौं– ५ वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका एक अभियुक्त त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै भवन बनाइरहेका छन्। सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा रहेका विमल पोद्दारले विमानस्थलभित्र भवन निर्माण गरिरहेका हुन्।
त्रिभुवन विमानस्थलको इन्टरनेसनलतर्फ आगमन क्षेत्रका लागि नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ। जहाँ पोद्दारको समूहलाई ५० रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ। पोद्दार भारतीय नागरिक हुन्।
उक्त जग्गामा अहिले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संगठित रुपमा ५ वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोहका व्यक्तिले विमानस्थलमा भवन बनाएपछि सुरक्षा खतरा झन् बढेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
उक्त ५० रोपनी जग्गा त्रिभुवन विमानस्थलले ६ वर्षअघि रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। २०५९ कात्तिक २ गते विमानस्थलले सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। पोद्दारसहित आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा र नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य मिलेर सो ठेक्का हात पारेका हुन्।
त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भए पनि उक्त कम्पनीका व्यक्तिहरुबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। आफू महाप्रबन्धक हुनुअघि नै त्यससम्बन्धी ठेक्का दिइएकाले विस्तृत जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
‘मैले पनि विमल पोद्दारको समूहले सो ठेक्का पाएको हो भन्ने सुनेको हुँ’, उनले भने।
सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ ले पोद्दारलाई गत असार ५ गते पक्राउ गरेको थियो। तस्करी गिरोहसँग उनको संलग्नता खुलेपछि टोलीले उनी विरुद्ध पनि संगठित अपराध मुद्दा चलाउन मोरङ पठाएको हो।
‘५ वर्षसम्म एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सुन तस्करी गर्नेले विमानस्थलभित्रै भवन बनाएपछि के-के गर्लान्’, विशेष अनुसन्धान टोलीमा रहेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले यस विषयमा समयमै निर्णय गर्नुपर्छ।’
पोद्दारको समूहद्वारा विमानस्थलभित्र निर्माणाधीन भवन र पार्किङ स्थल
सो ठेक्कामा संलग्न कांग्रेस सांसद आचार्यले पहिले आफूहरुले मिलेर ठेक्का लिएको र हाल त्यो प्रोजेक्टमा आफू आबद्ध नभएको बताए। रसुवाबाट निर्वाचित सांसद आचार्य निर्माण व्यवसायी पनि हुन्। पोद्दार पक्राउ परेपछि विवादमा आउने डरले उनले आफू संलग्न नभएको बताए पनि उनी त्यसमै आबद्ध रहेको स्रोत बताउँछ।
पोद्दार डिल्लीबजारस्थित सिल्भर सिटी अर्पाटमेन्टका मालिक समेत हुन्। जहाँ उनले व्यवसायी मल्होत्रासँग साझेदारी गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, अनुसन्धान टोलीले विमानस्थलको जग्गाको ठेक्काबारे समेत पोद्दारसँग सोधपुछ गरेको थियो। जसमा उनले विमानस्थल कार्यालयमा सेटिङ मिलाएर ठेक्का हात पारेको बताएका थिए।
एकैसाथ ५ सयभन्दा धेरै कारको पार्किङ गर्न मिल्नेगरी सो कम्पनीले पार्किङस्थल पनि बनाइसकेको छ। पार्किङ शुल्क समेत सोही कम्पनीले उठाउनेगरी सम्झौता गरिएको छ। सपिङ कम्प्लेक्स तथा एयरलाइन्सको कार्यालय राख्नेगरी भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसवापत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक ७० लाख र भाडाको १५ प्रतिशत पाउने समझदारी भएको छ। जुन निकै न्यूनतम भएको विमानस्थलमा अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘मुख्य विषय त सुरक्षा चुनौती नै हो’, विमानस्थल कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सुन तस्करी र हुन्डीको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुले विमानस्थलभित्रै भवन बनाएर व्यवसाय गरेपछि यहाँको अवस्था के होला?’
Afnai bhawan airport ma nai bayepachi ta jan dunga khojda deuta bete jastai bai haleuni. Soon taskariko lagi jan sajilo hune bayo.
Sarai gyar jimmedaripurn karya huna gayekale sarb pratham jimmedari kai bodh garaunu paryo Natra lathalinge deshko vatavunge chala jaslejanhan je payo Thehi khaja Sabdhan sabdhan sabdhan
Jata heryo chor nai chor Nepal ma..
नेपाली नेता,अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल सरकार,निजामती,गृह प्रशासन सबै बिकाउ हुन भन्न मलाई कुनै आपत्ति छैन.. अर्को जंग बहादुर कहिले जन्मिन्छ यो देशमा..
तस्करी को संख्या बडदै जान्छ बिमान्स्थलको सुरछा कम आगमी दीन चोरी डकैती बड्दै जान्छ
Nepali sarkarko dhyan kasko chakma cha